Hlola iLuxor, Egypt - World Tourism Portal
Hlola uLuxor, eGibhithe
Yini ukubona. Izindawo zokudlela ezihamba phambili eziphezulu eLuxor, Egypt
Iwebhusayithi esemthethweni yezokuvakasha yeLuxor
Bukela ividiyo ekhuluma ngoLoror
Igama elithi “Luxor” lisho ukuthi “Izigodlo” futhi liyindawo ehamba phambili yokuvakasha e-Upper (eningizimu) Egypt nesiGodi saseNayile. Inhloko-dolobha yezwe neyenkolo yezwe e-Middle Kingdom ne-New Kingdom Egypt, uLuxor unokuningi abahambeli abangakujabulela: amathempeli amakhulu, amathuna asebukhosini basendulo, ugwadule oluhle nokukhanga komfula kanye nempilo yesimanjemanje.
Hlola uLuxor okuthi yize uyidolobha elincane ngezilinganiso zabantu baseGibhithe, iLuxor ibanzi impela futhi ihlukaniswe kangcono yaba izifunda ze2 noma izindawo ezihlanganisa okukhangayo okuyinhloko ezinhlangothini zazo zomfula iNayile:
I-East Bank idolobha, ithempeli laseLuxor, iThempeli laseKarnak, I-Museum, izitimela, amahhotela, izindawo zokudlela
IWest Bank indawo yamanxiwa amakhulu kufaka phakathi Valley of the Kings, isiGodi saseQueens nezinye izingosi ezibalulekile; amanxiwa aseWestern Valley, namahhotela ambalwa.
Inhlokodolobha endala ye Egypt, IThebes, yayingasentshonalanga yeNayile eNayile. Yilapho iningi lamanxiwa namathuna kukhona.
Idolobha lanamuhla laseLuxor lisogwini lwase-East. Leyo ndawo ineziteshi zezitimela nezamabhasi, iningi lamahhotela nezindawo zokudlela, eminye iminyuziyamu, izitolo zabavakashi nokunye.
ILoror inesimo sezulu esishisayo esishisayo. Idolobha lingelinye lamadolobha ome kakhulu, atshiswa ilanga futhi ashisa kakhulu (ngesikhathi sasehlobo) emhlabeni. Imvula ayenzeki minyaka yonke, cishe nge-1mm. I-Luxor ifaka ubusika obupholile ngezinsuku ezithambile, kodwa nobusuku obubandayo.
Isikhumulo sezindiza saseLuxor International siyindawo yokuya ezindizeni emikhondweni eminingana yase-Europe naseMiddle East, kanye nesizinda esikhulu esiseningizimu sezindiza ezihlala ngaphakathi eGibhithe.
Ama-calèches, noma izinqola ezidonswa ngamahhashi, zivamile osebeni olusempumalanga futhi iyindlela ejabulisayo yokubona idolobha, ikakhulukazi ngesikhathi sasebusuku. Amanani ayahlukahluka ngokuya ngekhono lokuxoxisana. Uzodinga ukukweqa / ukuhamba uhambe ukuze uthole lezi zintengo.
Kungenzeka futhi ukuhamba uzungeze isifunda sabavakashi ngezinyawo ngesikhathi sezindawo ezipholile zosuku, uma nje unomuzwa omuhle wokuqondisa. Ukuze ugweme ukunakwa okungafuneki kuzodingeka ukuthi uphinde amagama athi "No Hazle", noma "Laa Shukran", okusho ukuthi cha Ngiyabonga ngesi-Arabhu. Futhi, zilungiselele ukumemeza amaPhoyisa Abavakashi uma kunokuthile okukhathazayo ngokuphepha kwakho. Kuhlala njalo kukhona amanye amaphoyisa eduze ngoba nawo angagqoka izingubo zomphakathi.
UDeir el-Bahari, iWest Bank, uLuxor. Amakhasi ahlukahlukene wesifunda saseLuxor aqukethe imininingwane eningilizayo neziphakamiso zezinto ezizobonwa. Izithombe ezinhle kakhulu, ezingaphuthelwa.
Isigodi Samakhosi. Qaphela ukuthi ngale ithikithi, uzothola ukukhetha amathuna we-3 ongavakashela kuwo cishe i-8 evulekile eSigodini Samakhosi. Ukufaka okungeziwe kuyadingeka kuTutankhamen noSeti I. Uma uthatha izithombe ngaphakathi ngaphandle kwamathikithi ekhamera (okuyi izindleko zakwenye ukungena), onogada bangacela ukubona izithombe ezisekhamera yakho. Kuzofanele ukhokhele ukufumbathisa uma bekubamba.
IThempeli laseKarnak. IKarnak ibuye ngaphandle kwenkabeni yedolobha futhi yaziwa kahle ngehlathi layo lamakholomu. Kuyithempeli elijabulisayo ukuthatha isikhathi sakho usesha imibala eye yahlala izinkulungwane zeminyaka.
Ithempeli laseLuxor. Qaphela ukuthi ithempeli laseLoror downtown livulwa ngemuva kokushona kwelanga. Yindawo epholile ukubona ithempeli njengokukhanya okushintsha.
Amabhomu AmaNobles. Qaphela ukuthi ungathenga amathikithi we-3 wamathuna, ithikithi ngalinye likuvumela ukuthi ungene kumathuna we-2-3 lilinye.
ITombs 96 (Sennofer - enhle ngemidwebo eminingi) kanye ne-100 (Rekhmire - enkulu kakhulu, futhi imidwebo eminingi) okuyizinto ezithakazelisa kakhulu
ITombs 55 (iRamose - enkulu kodwa ingenalutho), i-56 (i-Userhet - izigcawu zezolimo kanye nama-Osiris amaningi) ne-57 (Khaemhet - izifanekiso ezimbalwa ngaphakathi)
ITombs 52 (incane kepha ifaka izincazelo), i-69 (Meena - imidwebo eminingi epholile), i-41 (isanda kutholwa eminyakeni embalwa edlule)
UDeir el Medina noma isigodi sabadwebi. I-Deir el Medina eyakhiwe kakhulu futhi engavakashelwa kakhulu lapho imidwebo igcinwe kahle futhi ihle kakhulu. Kulula kakhulu ukufika kuyo njengoba uzokwazi ukuyidlulisa ngenkathi uvakashela amanye amasayithi. Ithikithi livumela ukungena kumathuna amangalisa we-3.
Indlu yokuqala yaseHoward Carter iyimnyuziyamu encane manje endaweni. Kukhona ithuna elihlekisayo laseTutankhamen nokuthi balithola kanjani ekuqaleni kepha ikakhulukazi liyigumbi eligcwele lendaba yokutholwa kwalo.
Suka eSigodini saseQueens unqamule ugwadule futhi udlule phezu kwamawa uqonde esiGodini Samakhosi
Qasha ibhayisekili futhi ugibele uzungeze iThebes yasendulo - kukuthatha ngaphansi kwemizuzu engu-15 ukufika lapho.
Ukugibela i-felucca yendawo ngaphambi kokushona kwelanga. Thatha uhambo lwe-felucca kuNayile ngohambo lwezinsuku lwe-2 ukuya Aswan.
Qasha imbongolo, ihhashi, noma ikamela ukuze ugibele ukuzungeza iBhange LaseLuxor. Iya ezintanjeni zikaFaro, nje ukuhamba nje okufushane ukusuka endaweni yokugcina izikebhe. Bazokuyisa ezindaweni lapho abaqeqeshi abakhulu bengayi khona, ukuze ukwazi ukujabulela okwangempela Egypt, nabantu bayo abanobungane nendlela yokuphila evuselelayo. Zonke izinsuku ziyehluka uma ubona iWest Bank ihhashi noma imbongolo, futhi abaqondisi bazokunakekela yonke indlela. Banamahhashi Wabasaqalayo kubagibeli abanolwazi. Ukugibela kweLanga nokugibela kweNayile yinto okumelwe uyenze.
Iya ukubhukuda echibini lehhotela ngemuva kosuku olunothuli lwamathuna namathempeli:
Kukhona okungenani izimakethe ezimbili ezahlukahlukene eLoror. Eyodwa itholakala ehholo elinomshini womoya, nezitolo ezitholakala ngapha nangapha kwehholo. Leli hholo lemakethe lixhumanisa imigwaqo emibili emikhulu.
Imakethe endala ithatha imigwaqo eminingana eduze kwethempeli likaLuxor. Kuyintokozo ukuhamba kuyo, njengoba iningi labantu abahamba ngezinyawo futhi kuyindlela yokuphumula esehhashi nasezimotweni emigwaqweni emikhulu. Le makethe izwa ngempela njengesikhumbuzo esidala futhi isivakashi sibuyiselwa emuva ngesikhathi. Imbozwe nge-trellis eyenziwe ngokhuni, ishunqa abantu elangeni. Izitolo eziningi zinikela ngezinto ezifanayo, ngakho-ke abathengi abahlakaniphile bayazungeza futhi bafuna intengo enhle kakhulu. Umuntu uvame ukuvumelana kangcono ngemuva kokuya ezitolo ezimbalwa.
Lapho uthola umthengisi omthandayo, hlala phansi, uphuze itiye, bese uqala umdlalo wokuxoxisana. Kungazizwa sengathi uqala ukuba yingxenye yomndeni. Ukuthenga into elula njenge-galabeya yekotoni kungathatha amahora amaningi, njengoba uzama cishe yonke i-galabeya eyodwa esitolo, bese udlulela ezintweni abacabanga ukuthi ungazifisela wonke umndeni wakho.
Ukuthenga noma yini kungahle kukhungathekise kakhulu ngenxa yokuthola izivumelwano njalo uma ungajwayelanga.
I-Souk eyinhloko eLuxor ilele e-Abd-El-Hameed Taha futhi inengxenye yezivakashi, kanye nesigaba sabendawo. Ukwesabeka esigabeni esikhulu sabavakashi seSouq kubi kangangokuba kuyinto ebabazekayo ehamba ngayo. Noma isiphi isifiso okwakudingeka ukuthi uthenge ngaso noma yini sizonyamalala ngokushesha njengoba amadoda amaningi azama konke ukubamba angaba nakho kuwe. Lokhu kufaka phakathi: “Ubukeka unenhlanhla,” “ubukeka ungumGibhithe,” “woza uzobona isitolo sami, ungabi naxaka,” futhi uqagela ubuzwe bakho. Kepha uma uqhubeka uqonde phambili (enyakatho neMafaafa Kamel), udlula engadini, uzofika eSouq yangempela, lapho abantu bendawo beya khona ukuyothenga - futhi ngokuzumayo umkhathi ushintsha ngokuphelele. Ngenkathi isigaba sendawo sihlanzekile kancane, simatasa kakhulu futhi asinazinkinga, ngakho-ke uthola ukuzikhethela abathengisi kanye nezimpahla zokuphenya.
ILoror iyipharadesi lomifino elinemifino eningi yezinkathi ezinjengotamatisi nekhukhamba.
Ukudla kuvame ukuqala nge-pita-pain kanye ne-mezze enjenge-baba ganoush noma i-taboulé.
Inkambo yakho eyinhloko ingahle ifake inyama noma izinkukhu, noma izitsha zesifunda ezifana nejuba noma unogwaja. Njenganoma iyiphi indawo evakashela izivakashi eGibhithe, akukaze kube nzima ukuthola ukudla kwaseNtshona okwenziwe kahle.
Imikhiqizo yobisi, enjenge-yoghurt noma i-gibna bayda ushizi (cabanga i-feta kepha i-creamier eningi), ingahle ihambisane nesidlo sakho esiyinhloko.
Okokugcina, amakhekhe amaningi amahle emifino ayatholakala, yize amanye engabonakala emnandi ngokweqile ekunambithekeni kwasentshonalanga.
Ngenkathi isidlo sakusihlwa sivame ukugcwalisa, ungathola ukuthi lokhu akuhlangabezani nezidingo zamandla ezivakashi ezixakekile. Qiniseka ukuthi udla isidlo sasekuseni esinenhliziyo enhle, uphuze amanzi amaningi, futhi udle amashushu njalo phakathi nosuku.
Emgwaqweni oseduze wethelevishini nesiteshi sesitimela kunabathengisi bezithelo abaningi - qiniseka ukuthi uthatha ezinye izithelo ezimnandi futhi ezingabizi. Laba bantu baphila impilo ethembekile ngasesitolo sabo futhi ngeke bazame ukukukhwabanisa. Uzothola ingxenye okungeyona eyabavakashi yeLoror enomusa kakhulu futhi emema, ekhombisa isiko leqiniso laseGibhithe.
Ukuthenga ubhiya newayini lendawo laseGibhithe kukhona idlanzana lezitolo eduze kwesiteshi sesitimela esikuRamsees Street - kulula ukuthola njengoba zinamashalofu agcwele ewayinini nobhiya ngemuva kwekhawunta. Amanani angaphambi kokuwohloka.
I-Luxor yaziwa njengenhloko-dolobha yokuhlupheka ye Egypt. Kulabo abangahambele izinkambo ezihlelwe ngokuphelele, ama-touts angenza ukubona kukhungathekise kakhulu. Kodwa-ke, ngaphakathi kwamathempeli, umuntu kufanele alwe nabaqondisi bakahulumeni abahola ngokusemthethweni abangabasebenzi bakahulumeni abasebenza ngokukufanele ngokukuhambisa ngenkani bese befuna izeluleko. Kungaba yinzuzo ukunikela ngaphambili ngesihloko esincane bese ucela “ukuzivakasha”.
Ubufebe nokusetshenziswa kwezidakamizwa akuthathwa kalula ngabaphathi bakahulumeni.
Vakashela uDendera. I-Luxor iyisisekelo esihle kuleli sayithi le-Ptolemaic yethempeli likaHathor elilondolozwe kahle. Amahhotela amaningi ahlela uhambo losuku - awudingi ukuhlala nawo ukuze usebenzise lezi zinsizakalo.
Kulabo abanesikhathi esithe xaxa ezandleni zabo ungangeza ukuvakasha ethempelini likaSeti I e-Abydos, enomsebenzi omuhle kakhulu wokusiza eGibhithe. Lolu uhambo olude lomgwaqo olusuka eLoror, kepha lungahlanganiswa nohambo losuku oluya eDendera.
Idolobha liphinde libe yisikhundla esihle sokuhamba ngokuhamba nge-Upper Egypt kuqhubeke Aswan no-Abu Simbel.